Hiditra ny mpianatra…alamino dieny izao ny fotoana
Sakafo tsara ho an’ny vehivavy mampinono
Rehefa mampinono dia tsara foana raha sakafo ara-dalàna sy miovaova ary ara-pahasalamana hatrany no hohanin’ny reny.
Misoroka ny adiadin’ankizy
Tsy maintsy hisangisangy na hifamaly ny samy ankizy ao an-trano indrindra raha zaza nifanarakaraka. Rehefa matetika loatra anefa dia lasa mankaleo ny mahita azy ireo. Toro-hevitra vitsivitsy afaka hisorohana izany ireto entina amintsika androany ireto.
Mamahana zaza : Fadio ny mitsoka ny sakafony!
Fihetsika fanaontsika Ray aman-dreny ny mitsoka ny sakafon’ny zaza amin’ny vava rehefa mamay loatra. Manazava ny tsy mampety izany fihetsika izany ity lahatsoratra ity.
HAINGON-TRANO MAMPIDI-DOZA NY ZAZA
Mahafinaritra antsika Reny ny manaingo trano matetika. Misy amin’izy ireo anefa no poizina raha misy zaza ao an-trano.
Ronono velona : Miaro ny ankizy amin’ny hatavezana
Ankoatra ireo hery izay hoentin’ny fisotroana ronono velona amin’ny vatana dia fantaro fa isan’ny zava-pisotro natoraly iray miaro ny ankizy amin’ny hatavezana izy io raha ny voka-pikarohana navoakan’ny manam-pahaizana iray avy any ivelany.
Ankizy mandeha ràn’orona : inona no atao ?
Zavatra tsy dia mateti-pitranga amin’ny ankizy ny mande ràn’orana. Tsy dia misy tokony atahorana loatra izy io raha tsy hoe : misy marary na voadoana ny faritry ny orona. Na ihany koa miverimberina be ilay izy.
Fetin’ny noely : Ireo fialam-boly azo hatao miaraka amin’ny ankizy
Hankalaza ny fetin’ny Noely isika rahampitso. Ankoatra ny fandehanana mamonjy fiangonana dia fotoana iray mampiavaka ny fety ny fiarahana amin’ny zanaka na ny fianakaviana ao an-trano,
Efa miditra ao anatin’ny fanomanana sahady ny fidiran ‘ny mpianatra isika Ray aman-dreny amin’izao fotoana izao.
Zavatra maro no tsy maintsy karakaraina sy homanina ao anatin’izany mba hampilamina tsara ny fiatrehana izay fidiran’ny ankizy izay indrindra ho an’ireo lehibe sady miasa. Ireto ary misy toro-hevitra dimy entina hanampiana anao amin’ny fihatrehana izany.
Raiketo mialoha ny “agenda” anao manokana
Mba hialana amin’ny fifandrifin-javatra tsy maintsy atao dia tsara raha arafitra mialoha ireo programa tsy maintsy hotanterahina na eo amin’ny samy lehibe na ho an’ny ankizy. Mamorona kaody iraisana mba hanamora ny fifandraisana.
Hifampizarao ny andraikitra
Mba hisian’ny filaminana ao an-trano dia tsara raha samy misahana andraikitra avokoa ny tsirairay na ny ankizy aza. Izay mety ho vitany omena ataony, ampianaro sy araho maso kely izy ny amin’izany hahafehezany sahady izay andraitra keliny. Ohatra: ny fampirimany ny efitra misy azy, manasa lovia kely,…
Omano mialoha ny sakafo herinandro
Manova zavatra be raha mialoha dia efa vidiana daholo ny sakafo rehetra mandritra ny herinandro amin’izay tsy miasa saina ny momba izany intsony. Azo hatao ihany koa rehefa tonga ny fotoana hidiran’ny mpianatra ny mikarakara ny sakafo mialoha mba hialana amin’ny fikoropahana.
Miezaha mifoha maraina
Mba hialana amin’ny fikoropahana dia tsara raha mifoha ora iray mialohan’ny fotoana tokony handehanana mba hahafahana miomana am-pilaminana indrindra rehefa manomanana ny zaza.